अचानक साधु भेषमा देखिए एमएस धोनी, कारण के ? – ramechhapkhabar.com
अचानक साधु भेषमा देखिए एमएस धोनी, कारण के ?
चेन्नई सूपर किङ्सका क्याप्टेन महेन्द्रसिँह धोनीको पछिल्लो लुक्स सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ ।उनका फ्यानहरूले अचम्मित हुँदै धोनीले किन यस्तो तस्वीर राखे भन्दै सोधिरहेका छन् । धोनीका फ्यानहरू उनको खेल कुशलताको मात्र नभई दाह्री र कपालको पनि फ्यान हुन् । तर पछिल्लो तस्वीरले उनीहरू निकै अचम्मित भएका छन् ।
धोनीले आफ्नो कपाल पूरै खौरीएका छन् भने दाह्री पनि । त्यसपछि उनले साधुको भेषमा नै तस्वीर खिचाएका छन् ।
स्टार स्पोट्र्सको अफिसियल ट्वीटरले धोनीको तस्वीर सार्वजनिक गरेको छ । उसले धोनीको फोटोबारे के सोच्नुभयो भन्दै प्रश्न समेत गरेको छ । धोनीको यो लुक आगामी कुनै विज्ञापनका लागि हुन सक्ने बताइएको छ । तर के हो भन्नेबारे खुलाइएको छैन ।
😮😮😮 – our faces since we saw #MSDhoni’s new avatar that could just break the Internet! 🙊What do you think is it about? pic.twitter.com/Mx27w3uqQh
साउदीमा अब विदेशी कामदारले मालिकको अनुमतिबिनै काम फेर्न र देश छोड्न पाउने
साउदी अरबले विदेश कामदारहरूलाई सजिलो हुने गरी ‘काफला’ प्रणालीमा सुधार गरेको छ। साउदी अरबका मानव संशाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत नोभेम्बरमा घोषणा गरेको सुधार आइतबारदेखि लागू भएको हो।
योसँगै अब साउदीमा रहेका विदेशी कामदारले मालिकको अनुमतिबिनै देश भित्रिने र बाहिरिने गर्न सक्ने छन्। विदेशी कामदारले काम परिवर्तन गर्न पनि मालिकको पूर्वस्वीकृति नचाहिने भएको छ।
यसबाट साउदीमा रहेका एक करोड विदेशी कामदार लाभान्वित हुने बताइएको छ। विदेशी कामदारलाई मालिकसँग बढी जिम्मेवार बनाउन काफला प्रणाली ल्याइएको थियो। विदेशी कामदारको हक खोसिएको भन्दै यसको विरोध भएको थियो। केही मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले आइतबारदेखि लागू भएको सुधारको स्वागत गरेका छन् तर काफला प्रणालीका केही प्रावधान अझै जारी राखिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।